Andro: 1 Febroary 2020
Hitombo ny fahaiza-manaon'ny Samsun Logistics Center
Ny fifanarahana ho an'ny "Samsun Logistics Center Horizontal closed Warehouse Construction Project", nosoniavin'i Samsun TSO ary nahazo alalana handray fanampiana amin'ny alàlan'ny Program Support Center Center (CMDP) tamin'ny taona 2019, dia nosoniavina niaraka tamin'ny lanonana iray. [More ...]
Miomana amin'ny angovo
Tao anatin'ny faritry ny Tetikasa Haingam-pandeha ambony amin'ny Ankara-Sivas; Tamin'ny 31.01.2020, ny Tale Jeneralin'ny TCDD Ali İhsan Uygun dia nanohy ny fitsirihana sy ny fanaterana ny famokarana ny tohodrano sy ny lalotra izay nitohy teo anelanelan'i Büşeyh-Yerköy, tao amin'ny Izzettin Transformer Center. [More ...]
Ben'ny tanàna İmamoğlu: 'Solosaina Kanal Istanbul dia horavana izahay hiresaka momba ny horohorontany'
Ny filoha İBB Ekrem İmamoğlu dia nanatrika ny atrikasa «Supporting Production, Planning and Marketing of Products Workshop», izay ahitana ireo manampahefana avy ao amin'ny monisipaly 11 metropolitanina. Namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety i İmamoğlu taorian'ny lanonana fanokafana izay nataony tamin'ny atrikasa. Imamoglu dia nilaza, "Channel Istanbul, [More ...]
Aza avela hijanona ny fiara tsy mandeha ao amin'ny tariby Keçiören!
Ny ben'ny tanàna Keçiören Turgut Altınok dia nilaza hoe: "Nandritra ny semester dia nanao serivisy maimaimpoana ho an'ny mpianatra ny lalànay mba tsy hanananay ankizy tsy mahita ny fiaranay tariby ao Keçiören sy Ankara. Izao no zanatsika rehetra te-hahita maso Keçiören. [More ...]
TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ sy TÜVASAŞ dia tokony tsy hanambatra
Fahatsiarovana fa nikasa ny hanangona ny TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ sy TÜVASAŞ eo ambanin'ny tafo tokana amin'ny fanapaha-kevitra izay misy ny fandaharam-piraisan'ny Tahirim-piraisana Taona 2019, ny Praiministra-Tiorka-Nurullah Albayrak dia nilaza fa tsy tokony hiaraka ny sampana telo rehetra. [More ...]
Lalana lalamby lalamby namboarina teo amin'ny tsipika fiadiana atsinanan'i Anatolian atsinanana
Profesora Dr. Uğur Doğan dia nilaza fa tsikaritr'izy ireo fa ny lalamby fiantsonan'ny lalamby ao amin'ny distrikan'i Palu tamin'ny taona teo aloha dia eo ambonin'ilay zotra Atsinanana Anatolian Fault no nametrahany ireo fitaovana fanaraha-maso ny fahadisoana tao anatin'ity tonelina ity. [More ...]
Ny sidina Akçaray dia mandeha 4 minitra
TransportationPark, sampana iray ao amin'ny kaominina Kocaeli Metropolitan, dia nanambara fa handalo isaky ny 4 minitra mandritra ny ora ambony i Akçaray. Ny sidina, izay hanomboka ny alatsinainy 3 febroary, dia ahafahan'ny olom-pirenena hiandry kely amin'ny gara. Tram-bava izay handalo amin'ny fotoan-tsarotra, [More ...]
56 Fiakaramanana isan-taona mankany Eurasia Tunnel Tolls
Avrasya Tunnel Construction and Investment Inc. Araka ny fampandrenesana natao tao amin'ny tranokala, ny alàlan'ny Eurasia Tunnel dia lalana 1 TL ho an'ny fiara, mahomby hatramin'ny 2020 Febroary 00, 00:36,40. [More ...]
Androany ny tantara: 1 Febroary 1926 Gara Station Ankara Gazi dia misokatra
Androany amin'ny tantara 1 Febroary 1926 Ankara Gazi Station no nosokafana. 1 Febroary 1930 Kayseri-Sarkisla tsipika (130 km) dia tafiditra ao anaty serivisy. Emin Sazak no mpifehy azy. 1 Febroary 1932 Tsipika Malatya-Fırat (30 km) dia miasa [More ...]